Madax Muuqda iyo Mini Saawir ah Midna Hadalkooda Lama Daayo – Rasaasa News
Feb 9, 2010 Eritrea, Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF
Maahmaahdan, waxay gaar u tahay haweenka waliba xiliyadii ayna soo badan farsamada biruhu, xiligaas oo qoyska reer miyiga ah uu lahaan jiray hal mindi oo ay xoolaha ku qashaan, afaduna ay colobta saygeeda ugu goyso, mindidaasi kolka ay gabowdo waxay ku dambayn jirtay caws gur in laga dhigto. Minidu kolka ay af beesho afadu kama maaranto oo mindi kale ma haysato, mindiduna waxay noqotay raaswis aan waxba goyn karin, kolkii loo baahdaba waxaa la isweydiin aawey minidiid. Hooyada qoysku mindida way kohataa kamana maaranto, mararka qaarkood minidaas waxay la masaysaa dhooreyda reerka u joogta, kolka ay hooyada ku kani adkaato ayey ku kohataa “madax kuu muuqda iyo mindi raawis ah midna hadalkooda lama daayo.”
Ujeedada arartaydu waxay ku arooraysaa ama ay ishaaraysaa ururkii la odhan jiray ONLF, oo kol ahaan jiray mid geeska afrika looga riyaaqay, wax walba oo gabalka Ogaden lagu xaman jirayna been ka yeelay. Xantaasi waxay ahay, kolkii ay somalida kale xornimo doonaysay maxaad idina xaqiina u raadsan weydeen, maxaad kaligiin dhulkiina u dhacsan weydeen IWM.
Waxaa uu ururka aas aaskiisu ku beegnaa burburkii wslf oo ay somaliya geeda fuul ku ahayd. waxaana u cuntami waayey Indheergaradkii Ogaden in sida ay wax u socdaan ayna dan ugu jirin, madaama dad 1miliyan kor u dhaafay ay qaxooti ku ahaayeen Somaliya.
Waxay ku qaadatay dhalinyartaas muddo in iyaga laftigoodu ay isfahmaan, ugu dambayntiina way isla jaanqaadeen oo waxay isku fahmeen kalma ah maxaa ina kulmiyey iyo jawaab ah ‘halgan’. Waxay noqotay kolkii ugu horesysay ee dad u dhashay dhulka somalida Ogadeeniya iyaga oo kaligood ah ay bilaabaan halgan ujeedo kaliya leh. In uu mabda,a halgankaasi guulaystay waxaa markhaati ka ah ummadaha dega geeska afrika, gaar ahaana ummada ku abtirsata magac somal. In kasta oo ay jireen dad yar oo gabalka u dhashay oo jecel in dhulka la xoreeyo, kase biyo diday oo kaliya magaca ururka ONLF oo usha u hayey halganka.
1993 Itobiya Tigray, way aqoonsatay rabitaanka dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee ay ONLF horsocoto. Isku dhac ay xubno ururka ah sameeyeen, ayey ka gadaal Itobiya ka faa,iidaysatay oo ay banaanka dhigtay ururka ONLF, sidaasina dagaalo ay ku bilowday ay sabab u ahaayeen axdi la,aantii ururkii TPLF.
In colaadi bilaabato ONLF kama qoomameynin oo waxay gaadhay guulo waaweyn, waxaana uu halganka wanaagiisu gaadhay guud ahaan ummada Somalida Ogadeeniya. Ummada halganka ku baraarugtay waxaa ku soo dhex dhuuntay ‘shaydaankii halganka’, isna baryuu shocaac bixiyey oo la shifaystay.
Xumaantii shaydaanku waxay keentay in halgamyaashii isu fiirsadaan oo ay wajiyadoodii uu shaydaanku fool xumeeyey arkaan, markaas ayey nacayb bilaabeen. Nacaybka kaliya kuma ekaynine shaydaanku wuxuu maleegay in dhiigii dahabka ahaa ee N/hurayaashu kaliya ay ugu tala galeen in ay xabad gumaysigu ku dhacdo ayey iyagii isku dhufteen. Sheeko way dhamaatay, halgankii waa la shidhaystay kol hadii walaalkaagii qaaliga ahaa dhiigaaga daadiyo ma cadow kalaa jira, jawaabtu waa maya.
Waxaa aad ii dhiba oo aan calool xumaadaa amaba aan garan waayaa aakharo iyo aduun meel aan joogo, kolka aan boggaga internetka ka akhriyo ururka ONLF, ayaa dad shacab ah ku laayay meel hebla, afar ONLF ah ayaa isa soo dhiibtay, ciidan ONLF oo gudaha ka soo carary ayaa waxaa laayey shacabka la qasbay ee qoryaha loo dhiibay.
ONLF, kolkii ay ONLF ahayd waxayaalahan dhagahayga dhibaya laguma sheegi jirin, lamana kala dhex mari karin dadweynaha iyo ONLF, maantase waxaa taagan waa magac bay, waana meesha aan ku bilaabay maahmaahda ah “madax kuu muuqda iyo mini saawir ah midna magacooda lama daayo.”
Jwxo-shiil ayaa u huladay ONLF, N/hurayaashii ONLF-na maanta waxay daadsan yihiin bariga afrika, waxaa duurka ku hadhay ee dadka dhibaataynaya waa dhalinyaradii reer miyiga ahayd oo aan garanayn in la tagi karo dalalka dariska Itobiyana ka cabsan, hadii ay geeloodii ku noqdaana is leh waa la idin soo sheegi. Wiilasha noocaas ah oo dadkoodiiba cadow u haysta meel ay aadaana aan garanaynin dhibka ay sameeyaan ayey boggaga Internetku ku halqabsadaan oo ay ku bi,inayaan magacii laga hoodaysan jiray ee ururkii ONLF, shaydaan Jwxo-shiil oo dhibka ummada somalida Ogadeeniya ku farxana ku dhiiri galinayaan isaga oo Eritrea ku jiraban.
rasaas baa runta sheegee rafii qaaga ka yeelo